एमाले प्रवेश गरेका प्रभु साह माओवादी केन्द्रमै फर्किदै ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमाले प्रवेश गरेका प्रभु साह माओवादी केन्द्रमै फर्किदै !
नेकपा खारेजीसँगै माओवादी केन्द्र र एमाले अलग अलग भएपछि प्रभु साहले एमाले रोजेका थिए । नेकपा खारेजीपछि केही समय माओवादी केन्द्रमै रहेका उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न थालेपछि एमालेमा सामेल भएर सहरी विकास मन्त्री बनेका थिए ।
अहिले उनी एमालेमा पनि सक्रिय छैनन् । पछिल्लो समय उनी माओवादी केन्द्रमै फर्किने सोचका साथ सो पार्टीका नेताहरुको सम्पर्कमा पुगेको बताइएको छ ।
प्रभु साहले ‘आइटी आर्मी’ नामक संगठन बनाएका छन् । सोही संगठनमार्फत उनी राजनीतिक गतिविधि गर्नुका साथै शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
प्रभु साहका साथमा माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा गएका नेताहरु विस्तारै माओवादी केन्द्रमा फर्किन थालेका छन् । त्यसैले पनि प्रभु साहमाथि माओवादी केन्द्रमै फर्कने दबाब बढेको स्रोत बताउँछ ।
प्रदेश २ का माओवादी केन्द्रका इन्चार्ज एवं स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले प्रभु साह पार्टीमा फर्किने कुरा पार्टीमा एजेण्डाको रुपमा नआए पनि नेताहरुको बीचमा चर्चाको विषय बनेको बताए ।
उनले भने, ‘पार्टीमा प्रभु साहलाई फर्काउने एजेण्डा बनेको छैन तर उहाँले पार्टीका नेताहरुसँग कुराकानी गरिरहेको चर्चा हुने गरेको छ ।’
प्रभु साहले पार्टीका शीर्ष तहमा कुराकानी गरिरहेको कुरा आफूले पनि सुनेको तर कोसँग कुरा भइरहेको भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको स्थायी कमिटी सदस्य साहले बताए ।
प्रभु साहले माओवादी केन्द्रमा फर्किन स्थायी कमिटी सदस्य माग गरिरहेका छन् । यद्यपि केन्द्रीय सदस्य पद पाए पनि उनी माओवादी केन्द्रमा फर्किने मुडमा रहेको उनका निकटस्थ नेता बताउँछन् ।
प्रदेश २ पार्टी कमिटीका सदस्य सत्यनारायण भगत ९रौतहट० ले प्रभु साह माओवादी केन्द्रमा फर्किने कुरा आफूले पनि सुनेको बताए । उनले प्रभु साह माओवादी केन्द्रमा फर्के पनि रौतहटका माओवादीले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने प्रस्ट पारे ।
माओवादी केन्द्रमा मधेसभित्र मातृका यादव र प्रभु साहले छुट्टाछुट्टै गुट चलाइरहेका थिए । उनीहरुको गुटबन्दीले मधेसमा पार्टीसमेत कमजोर भएको थियो ।
उनीहरु बीचको टकरावका कारण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि चिन्तित थिए । माओवादी केन्द्रबाट मातृका यादव केही समय अलग हुँदा मधेसमा प्रभु साहको एक्लै साम्राज्य थियो ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रभु साहलाई पार्टीमा ल्याउन पहल गरेका छन् । तर श्रेष्ठ भने यस्तो चर्चामा सत्यता नरहेको दाबी गर्दछन् । प्रभु साह माओवादी केन्द्रमा फर्किने कुरामा आफूलाई विश्वास नलागेको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले बताए ।
उनले भने, ‘प्रभु साह माओवादीमा आउने कुरा मैले पनि सुनेको हुँ तर उहाँ कुन नैतिकताले पार्टीमा फर्किनु होला र ? मलाई त उहाँ माओवादी केन्द्रमा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लागेको छैन ।’